Ungayithola kanjani imali yama-cryptocurrensets ngeBinance Liquid Swap - Cazoo
Ungayithola kanjani imali yama-cryptocurrensets nge-Binance Liquid Swap
Ikhaya » Ikhaya » Ungayithola kanjani imali yama-cryptocurrensets nge-Binance Liquid Swap
Tag: Ukushintshwa Kwe-Liquid Liquid, ukulahleka okungenamusa, umhlinzeki wezezimali, ukulahlekelwa okungapheli, Iphuli yoketshezi, Stablecoin, Veza, Vumelani ukulima
Uma ngabe okokuqala lapha, wamukelekile / wamukelekile!
Lapha eCazoo ngibhala amanothi ami ohambweni lwami lokuya kuleli zwe elincithakalo kakhulu lama-cryptocurrensets. Kungani ngikwenza? Kungani ngingakugcini kimi? Kungani Ukwabelana Kunakekela! Konke engikufundile, ngikufunde ngokufunda othile noma ngokubheka okuqukethwe komuntu. Isikhathi sokubuyisela emphakathini.
Uyakwazisa? Bhalisela u-Binance, uma ungakabhalisi, ngekhodi yami yokudlulisela! I-id yami yokungidlulisela ithi EIXFBK06, noma ungavele uchofoze lapha.
Njengoba sekushiwo, iCazoo iyi-travelogue, angiyena umeluleki wezezimali. Ungenzi iphutha lokutshala imali ongeke ukwazi ukuyikhokhela. Ukutshalwa kwemali kuyingozi kakhulu: uma ungaqapheli ulahlekelwa ithrekhi yezimali zakho, ulwela ukuhambisana nemisebenzi ofuna ukuyilandela. Ngingakunika kuphela iseluleko esisodwa, qaphela / uqaphele.
Kuyini ukushintshwa kweBiance Liquid
Ngabe i-Binance Liquid Swap inquma kanjani intengo yama-cryptocurrensets?
Kungani i-Binance Liquid Swap?
Ngabe i-Binance Liquid Swap isebenza kanjani?
Uyenza kanjani imali nge-Liquidity Swap?
Yimalini inzuzo ekuhlinzekeni ukwenziwa kwemali kuma-crypto pair?
Ngabe ubona kuphi ukuzuza nokulahlekelwa?
Ukushintshwa kwe-Liquid Liquid kusekelwe kumgomo, osetshenziswa kabanzi ngaphakathi komhlaba we-DeFi, we "echibini lesikweletu" (I-Liquidity Pool) ukuhweba ama-cryptocurrensets.
Intengo ye-crypto kuzonqunywa inani lama-cryptocurrensets echibini lezimali.
Ukushintshaniswa kweBinance Liquid kunquma kanjani intengo yama-cryptocurrensets?
I-Binance Liquid Swap isebenzisa ifomula ekhethekile ukuthola imali yokuthengiselana nentengo phakathi kwama-cryptocurrensets amabili. Ngubani Othonya Amanani we-Crypto? Abahwebi. Ngokufanayo, abathengisi abafaka futhi basuse izimali echibini lezimali bayabandakanyeka ekwenzeni izimakethe (ku-jargon sivame ukufunda i-AMM, i-Automatic Market Maker).
Ngokushintshwa kweBinance Liquid, labo abafuna ukwenza ukuhweba phakathi kwama-cryptocurrensets bangakushintshanisa ngokushesha okukhulu. Kepha akupheleli lapho!
kungenzeka futhi thola inzalo ngokungeza imali echibini.
Shintsha ama-cryptocurrensets ngemizuzwanaImisebenzi emincane ngeke ikhiqize noma yikuphi ukusabalala phakathi nale nqubo, ngenkathi imisebenzi emikhulu izokwehlisa kakhulu ukuhlunga ngokushintshana. Abahwebi bangajabulela amanani entengo azinzile namakhomishini wokuncintisana.
Faka ukheshi bese uthola inzalo ekubanjweniAbahwebi abengeza ukwedlula echibini bazothola ingxenye yezimali ezenziwa ukuthengiselana kwamachibi futhi bajabulele inzalo kuma-cryptocurrensets. Qaphela kahle- Izimali zingasuswa echibini ngokususelwa ekubambeni iqhaza kwangempela echibini. Kusukela ekususweni kungenzeka ukuthi uthole izimali ezimbili zepheya elikhethiwe ngokulingana, noma ungakhetha ukuthola eyodwa kuphela. Uma ukhetha ukuthola i-cryptocurrency eyodwa kuphela, kuzofanele ukhokhe imali yokuthengiselana, ezodonswa enanini olitholayo.
Ukuze uqale ukusebenzisa i-Binance Liquid Swap udinga ukuya Kwezezimali> Ukushintshwa Kokushisa.
I-Binance: Ezezimali> Ukushintshwa Kwamanzi
Ngaphakathi uzobona izinhlobo ezimbili zemikhiqizo: Iqinile e Innovation.
Umkhiqizo ozinzile noMkhiqizo we-Innovatoin
Iqinile kubhekiswa kumachibi we-solidcoin liquidity, njenge-BUSD ne-DAI.
Innovation kubhekiswa kumachibi okwenziwa isikweletu se- izimpahla eziguquguqukayo, njenge-ETH, i-BTC ngisho ne-GBP, nayo i-fiat currency.
Ngemuva kokungeza izimpahla zakho echibini lemali, uzonikezwa elinye share, uzonikezwa ingxenye (encane kakhulu). Noma nini lapho ukushintshana kwenzeka ngaphakathi kwalelo chibi lamanzi, uzonikezwa ingxenye yamakhomishini, ngokuya ngesabelo sakho, isabelo sakho. I-peasy elula.
Ukushintshwa Kwe-Liquidity Liquidity: Isabelo esitholwe ngokunikeza lokho kwempahla
Phezulu kwe-Liquid Swap kunesilinganiso sesivuno, inzalo etholakele, yamabili anganikezwa isikweletu.
Ukulinganiselwa kwesivuno, kwesivuno, kwamapheya ezinhlamvu zemali
Imbuyiselo ephelele ibalwa ngokususelwa kwifomula ekhomba inzalo ekhokhwe izolo nayo yonke imali yokuhweba:
Ifomula: (inzalo isiyonke ekhokhwe izolo + inani eliphelele lezimali zokuhweba izolo) / inani eliphelele lechibi phakathi kwamabili izolo * 365.
Ukuzulazula ngaphezulu kokukodwa ngazimbili kohlamvu lwemali kukukhombisa ukwakheka kokukhiqiza.
Ukuzuza nokulahleka kuboniswa kusabelo sami futhi kubiza ngentengo ye-USD.
Ungayihlola Kanjani Imali Yokutshala Yokulima ku-Binance Liquid Swap
Ingabe ukuba ne-crypto emile ungenzi lutho kunengqondo? Ukuqasha ukuthi babe nemali engenayo ehlala njalo kuma-cryptocurrensets akuwona umqondo omubi, awucabangi?
Kepha khumbula ukuthi amachibi we-Innovation elawulwa yimali angaphansi kokushintshashintsha okukhulu, ngenxa yamanani wokushintshaniswa kwemakethe nobukhulu bechibi. Lezi zinto zingadala ukwehla okukhulu kunani olitshalile esikhathini samahora angama-24.
Noma ngabe uba Umhlinzeki Woketshezi kungaba nenzuzo enkulu, ukulahleka okungapheli kungumqondo oyisihluthulelo oyisisekelo wokuwuqonda, ukuze ungazibeki engcupheni yokulahlekelwa yikho konke.
Sikhuluma ngakho kungekudala.
Ngikukhumbuza ukuthi uma ungakabhaleli uBinance, ungakwenza ngokuchofoza kulesi sixhumanisi. Futhi unamakhomishini kwehliswe ngo-20%, kuze kube phakade!
Isihloko sangaphambiliniI-Metamask: umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo esikhwameni esihle seDeFi
Isihloko esilandelayoIyini i-AMM, i-Automated Market Maker?
Ukunikezwa kwebhola: ukushintshanisa i-fiat nokwabelana. Umklomelo wePhuli: 50.000 BUSD ngeBinance